Voaroaka teo amin’ny tranony izy ireo, noho ny resaka fifanolanana fampindramam-bola, izay nivadika ho fivarotana trano. Raha ny angom-baovao, dia nanatanteraka fampisamboram-bola tamina Ramatoa iray ny tompon’ny trano, ny 17 septambra 2010, izay mitentina 51.600.000 ariary. Nisy ny taratasy nifanaovana momba io fampisamboram-bola io ary tataovana zana-bola 18%. Ny rijan-teny nampiasaina anefa, dia hoe : « fifampivarotana fa tsy mety ny tompom-bola ny hoe fampisamborana ». Na izany aza, nanome toky tanteraka ny tompom-bola fa tsy hivadika, ary ny volany ihany no averina fa fombafomba ara-taratasy fotsiny io.
Hosoka sy fampiasana hosoka ?
Ny manaitra tamin’ity raharaha ity, ny andron’io 17 septambra 2010 koa, nisy antontan-taratasy voalaza fa natao koa tany amin’ny kaominina Sabotsy Namehana, milaza fa nanatanteraka fampivarotana ilay nindram-bola, izay nolaviny tanteraka. Ny 28 jolay 2011, nisy ny fangatahana famindrana ny « Titre N°3987-H » momba ny tranon’ilay nindram-bola. Rehefa nojeren’ilay ramatoa nindram-bola anefa, ny antontan-taratasy rehetra, izay nanjary lasa fampivarotana no niseho, fa tsy fampindramam-bola. Voalaza fa ny 17 septambra 2010 no nanatanterahana ny taratasy teny amin’ny boriborintany fahadimy, izay nanjary 15 septambra 2010. Tsikaritra koa fa diso ny anaran’ny ray aman-drenin’ilay nindram-bola, kanefa tsy tokony ho diso ny anarana misoratra anaty kara-panondro. Miahiahy hosoka sy fampiasana hosoka ny lasibatra amin’izao raharaha izao. Niakatra fitsarana ny raharaha, saingy nanjary resy hatrany ny tompon-trano. Ny matoan’ny didim-pitsarana tao amin’ny fitsarana ambony ny taona 2017, no nentina nanalana ny tompon-trano, ny 31 janoary 2020 teo.
Ny alin’ny 24 desambra 2019, nitrangana fanafihana mitam-piadiana tao amin’ireo fianakaviana ireto, izay marihina fa manambady teratany vahiny ilay nindram-bola, ary manan-janaka vavikely 12 taona. Tsy nandroba entana na vola ireto jiolahy na dia nolazain’ilay raim-pianakaviana aza, fa misy vola ao amin’ny Cyber-n’izy ireo ao ivelany, fa tsy mitahiry vola ao an-trano ry zareo. Niharan’ny fampijaliana ilay raim-pianakaviana, raha niharan’ny fanolanana tamin’ireo jiolahy miisa telo kosa, ilay zazavavikely 12 taona. Hatreto, tsy fantatra mazava ny mahatonga izao fanolanana mampiahiahy izao. Marihana fa rahampitso talata no hiakatra fitsarana ity raharaha ity ka andrasana ny fivoarany.